Mudane Salaad ?Jidad waa weyn oo qaar laami yihiin ayaan ka hir-gelin doonaa Galkacayo? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Mudane Salaad ?Jidad waa weyn oo qaar laami yihiin ayaan ka hir-gelin doonaa Galkacayo? (Dhegeyso)
Agoosto 17, 2013 6:05 b 0
Galkacayo, August 17, 2013 – Maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Galkacayo ee xaruunta gobolkaas ayaa waxaa ay maanta ka hadleen arrimo dhowr ah, oo ay ku jiraan amaanka iyo horumarinta dhanka dhismaha ee xaruun goboleedka Mudug.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka mudug Axmed Muuse Nuur ayaa ka hadlay amaanka guud ee gobolka, isagoo si gaar ah diirada u saaray Galkacayo, wuxuu sheegay in marka laga reebo dilal qorsheysan iyo qaraxyo ay haatan xaalada magaaladu tahay mid wanaagsan.
Mudane Nuur wuxuu ugu baaqay shacabka galkacayo in ay u istaagaan ka shaqeyna amaanka magaalada, oo ay ku howlan yihiin ciidamada amaanka ee gobolkaas.
Docda kale Duqa Galkacayo Axmed Cali Salaad ayaa isna maanta ka hadlay xaalada Galkacayo, wuxuu sheegay in ay wadaan qorshe horumarin ah oo ay ku balaarin doonaan magaalada.
Gudoomiyuhu wuxuu sheegay in ay socdaan qorshayaal lagu dhisayo jidad waa weyn oo qaarkood Laami yihiin lagana hir-gelinayo magaalada Galkacayo, wuxuu ugu baaqay shacabka in ay ka shaqeeyaan ?amniga, si loogu talaabsado horumar iyo bilicda oo la kordhiyo.
Dhegeyso hadalka duqa Galkacayo Axmed Cali Salaad
Baahin: Sabti, 17 AUG 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdirisaaq C Cabdi Silver ~ Daljir ~ Galkacyo
Omamo defends KDF on Somalia trade allegations